Tsamba kuvaGaratiya 4:1-31
Hamusisiri varanda, asi mava vanakomana (1-7)
Pauro anonetseka nezvevaGaratiya (8-20)
Hagari naSara: sungano mbiri (21-31)
Jerusarema riri kumusoro, amai vedu, rakasununguka (26)
4 Ndinoti kana mugari wenhaka achiri mwana mudiki, haana kusiyana nemuranda, kunyange zvazvo ari ishe wezvinhu zvese, 2 asi ari pasi pevachengeti nevatariri kusvikira zuva rakasarudzwa nababa vake rasvika. 3 Ndizvo zvatakanga takaitawo isu pataive vana. Takanga takaitwa varanda vezvinhu zvekutanga zvenyika.+ 4 Asi pakazonyatsokwana nguva yacho, Mwari akatuma Mwanakomana wake, akaberekwa nemukadzi,+ akava pasi pemutemo,+ 5 kuti asunungure achiita zvekutenga vaya vaiva pasi pemutemo,+ kuti isu titorwe* tive vanakomana.+ 6 Saka sezvo muri vanakomana, Mwari akatumira mweya+ weMwanakomana wake mumwoyo medu,+ uye unoshevedzera kuti: “Abha,* Baba!”+ 7 Saka iwe hausisiri muranda asi mwanakomana; uye kana wava mwanakomana, zvinoreva kuti wakaitwa naMwari kuti uve mugari wenhaka.+ 8 Kunyange zvakadaro, pamakanga musingazivi Mwari, maiva varanda vevaya vasiri vanamwari. 9 Asi iye zvino zvamava kuziva Mwari, kana kuti toti, zvamava kuzivikanwa naMwari, sei mava kudzokerazve kuzvinhu zvekutanga zvisina simba+ uye zveurombo, muchidazve kuva varanda vazvo?+ 10 Muri kuchengeta nemwoyo wese mazuva nemwedzi+ nemwaka nemakore. 11 Ndinokutyirai kuti ndingadaro ndakatambisa nguva yangu pamuri. 12 Hama, ndinokukumbiraiwo kuti muve seni, nekuti ndaimbovawo semi.+ Hapana chamakanditadzira. 13 Asi munoziva kuti kurwara kwandakaita ndiko kwakaita kuti ndive nemukana wangu wekutanga wekukuzivisai mashoko akanaka. 14 Uye kunyange zvazvo zvandakanga ndakaita zvaiva muedzo kwamuri, hamuna kundishora kana kundisema;* asi makandigamuchira sengirozi yaMwari, saKristu Jesu. 15 Mufaro uya wamaiva nawo wakaendepi? Nekuti ndinokupupurirai kuti, kudai zvaibvira, mungadai makatodogora maziso enyu mukandipa.+ 16 Saka ndava muvengi wenyu nekuti ndinokuudzai chokwadi here? 17 Vari kushingairira kuti vakutorei, asi havasi kuzviita nechinangwa chakanaka; vari kuda kukuparadzanisai neni, kuti muve nechido chekuvatevera. 18 Asi nguva dzese zvakanaka kuti munhu ashingairire kukutsvagai nechikonzero chakanaka, kwete pandinenge ndiinemi chete, 19 imi vana vangu vadiki,+ vandava kusununguka zvakare ndichirwadziwa kusvikira Kristu aumbwa mamuri. 20 Ndiri kungoti dai ndaikwanisa kuva pamwe nemi iye zvino ndachinja matauriro andiri kuita nemi, nekuti ndiri kunetseka zvikuru nezvenyu. 21 Ndiudzei, imi munoda kuva pasi pemutemo, Hamunzwi here zvinotaurwa muMutemo? 22 Semuenzaniso, zvakanyorwa kuti Abrahamu akava nevanakomana vaviri, mumwe nemurandasikana+ uye mumwe nemukadzi akasununguka;+ 23 asi uya akaberekwa nemurandasikana akaberekwa sezvinongoitwawo vamwe vese*+ uye uya akaberekwa nemukadzi akasununguka akaberekwa kuburikidza nevimbiso.+ 24 Zvinhu izvi zvinogona kutorwa semufananidzo; nekuti vakadzi ava vanomiririra sungano mbiri, imwe yakabva paGomo reSinai,+ iya inobereka vana veuranda, inova ndiyo Hagari. 25 Saka Hagari anomiririra Sinai,+ gomo riri kuArabhiya, uye akafanana neJerusarema ranhasi, nekuti riri muuranda nevana varo. 26 Asi Jerusarema riri kumusoro rakasununguka, uye ndiro amai vedu. 27 Nekuti zvakanyorwa kuti: “Fara iwe mukadzi ngomwa, asingabereki; tanga kushevedzera nemufaro, iwe mukadzi asina marwadzo ekusununguka; nekuti vana vemukadzi akasiyiwa vazhinji kupfuura vemukadzi ane murume.”+ 28 Saka imi hama, muri vana vevimbiso sezvakanga zvakaita Isaka.+ 29 Asi sezvakangoitika panguva iyoyo kuti uya akaberekwa sezvinongoitwawo vamwe vese* akatanga kutambudza uya akaberekwa kuburikidza nemweya,+ ndizvo zviri kuitikawo iye zvino.+ 30 Kunyange zvakadaro, rugwaro runotii? “Dzinga murandasikana nemwanakomana wake, nekuti hazviiti kuti mwanakomana wemurandasikana ave mugari wenhaka pamwe chete nemwanakomana wemukadzi akasununguka.”+ 31 Saka hama, isu hatisi vana vemurandasikana, asi vemukadzi akasununguka.
^ Kana kuti “kundisvipa.”
^ ChiGir., “nenzira yenyama.”